फिदिम । पाँचथरमा रुखको गोलियाले किचेर एक युवकको मृत्यु भएको छ । सल्लाको गोलिया पल्टाउने क्रममा गोलियाले किचेर पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–७ बरबोटेका १८ वर्षीय राजेश
नेत्र कोइराला, थर्पु पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट रु. ४८ करोड ९० लाख हुने भएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण, समपुरक तथा
नेत्र कोइराला, थर्पू याङवरक गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबाट कृषकहरुलाई १७ थान हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ । कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गाउँपालिका भित्रका कृषक समूह
फिदिम । शंकास्पद अवस्थामा घाइते फेला परेका एक युवकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । तमोर कोरिडोरअन्तर्गत जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिका–७ एकचेपाको भीरमा घाइते अवस्थामा फेला परेका हिलिहाङ गाउँपालिका–४ मझैटारका ३६
घाँस काट्ने क्रममा लडेर महिलाको मृत्यु
फिदिम । घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट लडेर पाँचथरमा एक जना महिलाको मृत्यु भएको छ पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका वडा नं. ७ फुङप्रसाद आङदेम्बेकी श्रीमती ५५ वर्षीया टीका शेर्माको हिँजो भीरबाट लडेर
ट्याङ्करको ठक्करबाट घाइते मोटरसाइकल चालकको उपचारका क्रममा मृत्यु
फिदिम । ट्याङ्करसँग ठक्कर खाई घाइते भएका मोटरसाइकल चालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । हिँजो जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिका–७ सल्लेरीमा ट्याङ्करसँग ठक्कर खाई घाइते भएका मोटरसाइकल चालक सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–७
फिदिम । दिनानुदिन बजार बढ्दै जाँदा पाँचथर–इलाम सीमावर्ती घुर्बिसेपञ्चमी बजारमा खानेपानीको अभाव चुलिएको छ । विगतमा खानेपानीका लागि प्रयोगमा रहेका मुहानहरु क्रमशः सुक्दै जानुका साथै कतिपय मुहानबाट ल्याइएको पानी बन्द
फिदिम । पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले आवश्यकता पहिचान गरेर विकास र सुधारका कामलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ । गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वृजहाङ आङदेम्बेले गाउँपालिका भित्रका आम विषयहरुको अध्ययन गरेर विकास
झापामा मोटरसाइकल चोर्दै, पहाडी जिल्लामा लगेर बेच्दै
झापा । झापाबाट चोरी भएका मोटरसाइकल पहाडी जिल्ला लगेर बेच्ने गरेको खुलासा भएको छ। झापा प्रहरीले चोरी भएका चार वटा मोटरसाइकलसहित घटनामा संलग्न दुई जनालाई पक्राउ गरेसँगै यस्तो खुलासा भएको
फिदिम नगर कार्यपालिका सदस्यमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी
फिदिम । फिदिम नगर कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस सहितको गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । आज सम्पन्न भएको दलित वा अल्पसङ्ख्यक नगर कार्यपालिका सदस्य पदको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी
मिक्लाजुङ गाउँ कार्यपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवार निर्बिरोध
फिदिम । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँ कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस सहितको गठबन्धनका उम्मेदवार निर्बिरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मिक्लाजुङका अनुसार दलित वा अल्पसङ्ख्यक गाउँ कार्यपालिका सदस्यमा नेकपा